Factory Tour - Hebei Delin Machinery Co., Ltd.
Ny kalitaon'ny vokatray dia tsara kokoa noho ny orinasa hafa ao amin'ny orinasa iray. Ny fanandramana manomboka amin'ny fandefasana ataon'ny mpandraharaha efa za-draharaha sy mahay ary mpanara-maso dia miantoka ny kalitaon'ny kalitao rehetra amin'ny masinina manontolo.
Manana andiana fitaovam-pamokarana izahay, ao anatin'izany ny planomiller, ny lathe mitsangana, ny milina fandavahana, ny mixer mihetsika, ny milina manomana fasika, ny lafaoro miempo, ny lafaoro fitsaboana amin'ny lafaoro, sns.
fitaovana fanandramana ho an'ny fitaovana: ny firafitry ny metalylographic, ny fanodinana ny kojakoja, ny milina, ny fanangonana ary ny fahombiazan'ny vokatra dia azo atao amin'ny alàlan'ny fitaovana fanaraha-maso ho an'ny famakafakana sy fanandramana fitaovana, toy ny tester shock ho an'ny faharetana, tester tanjaka manerantany, tester force peel, ary fitaovana fandrefesana ary fitaovana fanaraha-maso hampiasaina manokana sy hampiasaina manerantany. Ankoatr'izay, nanangana sehatra fitsapana matihanina izahay amin'ny fitsapana ny vokatra toy ny paompy.
Fanandramana fampisehoana ho an'ny vokatra
Delin no manana ny tobin'ny fitsapana rano lehibe indrindra ho an'ny plurry plump any Shina Avaratra. Ny zava-bitan'ny vokatra dia hozahana alohan'ny fandefasana, hahazoana antoka ny fahamendrehana sy ny kalitaon'ny vokatray.